ကူဂါ - ဝီကီပီးဒီးယား
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဂလေးရှား အမျိုးသားဥယျာဉ်မှ မြောက်အမေရိကန် ကူဂါတစ်ကောင်
ကူဂါများ နေထိုင်ကျက်စားရာ နယ်မြေဒေသများ
ကူဂါ (အင်္ဂလိပ်: Cougar) ဆိုသည်မှာ ကြောင်မျိုးရင်းဝင် သားရဲတိရစ္ဆာန်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး အမေရိကတိုက်၏ ဒေသရင်း မျိုးစိတ်လည်းဖြစ်သည်။ ကူဂါကြောင်ကြီးများသည် အနောက်ကမ္ဘာခြမ်းရှိ မည်သည့် ကုန်းနေ နို့တိုက်သတ္တဝါ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ထက်မဆို အများဆုံးပျံ့နှံ့နေထိုင်သည့် တိရစ္ဆာန်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့အား မြောက်အမေရိကတိုက်ရှိ ကနေဒါနိုင်ငံ၊ ယူးကွန်းနယ်ဒေသမှ တောင်အမေရိကတိုက်ရှိ အင်န်ဒီးစ် တောင်တန်း၏ တောင်ပိုင်းဒေသများအထိ ဖြန့်ကျက်တွေ့ရှိရသည်။
ဂူဂါသည် သစ်ကျုတ်၊ လျင့်ဇ် ကြောင်မြီးတို၊ အိမ်ကြောင်၊ သစ်ကြောင်၊ ကရကယ် တောကြောင်တို့နှင့်အတူ မျိုးရင်းခွဲ "ဖယ်လီနီ (Felinae)" ထဲတွင်ပါဝင်ပြီး၊ မျိုးစုအမည် "ပူမာ (Puma)" နှင့် မျိုးစိတ်အမည်မှာ "ပူမာ ကွန်ကာလာ (P. concolor)" ဖြစ်သည်။
ကူဂါသည် နေရာဒေသကျယ်ပြန့်စွာ နေထိုင်ကျက်စားသောကြောင့် နေရာဒေသအသီးသီးမှ ၎င်းအား "ပူမာ (Puma)၊ တောင်ခြင်္သေ့ (Moutain lion)၊ တောင်ကြောင် (Catamount)၊ ပန်သာ (Panther) နှင့် ပိန့်သာ (Painter)" စသဖြင့် အမည်အမျိုးမျိုး ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။
↑ "Puma concolor" (2015). IUCN Red List of Threatened Species 2015. IUCN.
↑ ၂.၀ ၂.၁ Wozencraft၊ W.C. (2005)။ "မျိုးစိတ် ပူမာ ကွန်ကာလာ"။ in Wilson၊ D.E.; Reeder၊ D.M (eds.)။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိသော နို့တိုက်သတ္တဝါမျိုးစိတ်များ: မျိုးရိုးခွဲခြားခြင်းနှင့် ပထဝီမြေမျက်နှာပြင်ဆိုင်ရာ ရည်ညွှန်းကျမ်း (တတိယအကြိမ် ed.)။ ဂျွန်ဟော့ကင်းတက္ကသိုလ် ပုံနှိပ်တိုက်။ pp. ၅၄၄–၅၄၅။ ISBN 978-0-8018-8221-0။ OCLC 62265494။
↑ ၃.၀ ၃.၁ အင်္ဂလိပ် ဝီကီပီးဒီးယား၏ "Cougar" ဆောင်းပါး
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကူဂါ&oldid=718354" မှ ရယူရန်